Ngwọta - AOOD Technology Limited
A na -eme teknụzụ ịkpọtụrụ AOOD site na ịkpọtụrụ ụyọkọ ahịhịa pụrụ iche na eriri mmachi ma ọ bụ okirikiri etinyere na osisi. Ọ nwere ike dị elu, akara na ike na -ebufe data, ọkachasị ọla edo na ịkpọtụrụ ọla edo nwere ike ịnagide mgbaama adịghị ike ma ọ bụ nnyefe data dị elu ma nwee ntụkwasị obi dị elu. Silver na ịkpọtụrụ ọlaọcha nwere ike gboo mkpa nke ebumnuche ọnụ ala nke nnyefe ike a pụrụ ịdabere na ya.
Teknụzụ na -enweghị kọntaktị
Na nyocha CT, ọ chọrọ mgbanaka mmịfe nwere nnukwu oghere iji hụ na mbufe ọnụego data dị elu na -arụ ọrụ ngwa ngwa. Ndị injinia AOOD na-azụlite teknụzụ nnyefe na-anaghị akpọtụrụ maka ngwa ndị a. Mgbaaka ndị na-anaghị akpọtụrụ na-enye ike dị elu dị elu ma ọ bụ nyefe data na-enweghị ndozi na ndụ ọrụ ogologo karịa brushes nkịtị na-akpọtụrụ mgbanaka mmịfe.
Teknụzụ kọntaktị Rolling-rings
Teknụzụ ọhụrụ na-agbagharị agbagharị AOOD na-anabata ịkpọgharị mgbaaka iji mata ọrụ mbufe nke mgbanaka mgbanaka, nke na-eji mgbaaka ọla kọpa mmiri nke ejiri ọla edo kpuchie nke dị n'etiti oghere ọla abụọ dị oke ọnụ ahịa kama ịkpọtụrụ mmịfe ọdịnala. Ọ nwere nguzogide ịkpọtụrụ dị ala, uwe dị ala, mkpọtụ eletrọnịkị dị ala, ogologo ndụ na ikike mbufe ugbu a dị elu. Ọ bụ ihe ngwọta mgbanaka mgbanaka zuru oke maka sistemụ ndị ahụ chọrọ nha buru ibu, ikike dị ugbu a na mgbanaka mgbatị ogologo ndụ. AOOD akpọrọ mgbanaka mgbanaka na-eme ọmarịcha ọrụ ha na ahụike, nchekwa, ikuku na ngwa igodo.
AOOD mgbanaka mmịfe ọla na -eji ọdọ mmiri mmiri mercury jikọtara ya na kọntaktị kama ịkpọtụrụ ahịhịa ahịhịa nke ọdịnala. Ụkpụrụ kọntaktị pụrụ iche ha na -eme ka ha jide n'aka na ha nwere ike na -eguzogide dị ala yana njikọ siri ike n'okpuru nnukwu ọsọ na -arụ ọrụ, ma nwee ike ibufe ruo 10000A ugbu a n'otu osisi. A na -eji ọtụtụ mgbanaka mgbanaka mercury dị ugbu a AOOD na igwe ịgbado ọkụ.
A mụrụ nnyefe fiber optic maka ọnụego data kacha elu. Teknụzụ AOOD fiber optic nwere ike hụ na ọnụego data ruru 10 Gbit/s ọbụlagodi n'okpuru oke ọnọdụ. AOOD fiber optic rotary na -ejikọ ya na igwe anaghị agba nchara yana ruo nchekwa IP68, enwere ike iji ya na ụdị ngwa ọ bụla sitere na ngwa ahụike, ROVs ruo radars onyunyo ndị agha. Enwere ike jikọta nnyefe eriri na eriri elektrik na-amị amị amị mkpa nke sistemụ mgbanaka mgbanaka elektrọnik.
AOOD na -enye usoro nnyefe mgbasa ozi dị elu n'etiti ikpo okwu edobere na igwe na -agbanwe agbanwe, dị ka igwefoto TV, ụgbọ elu na -enweghị ụgbọelu na sistemụ radar. AOOD na -enye ohere nnyefe mgbaàmà na oke ikuku site na DC ruo 20GHz, enwere ike itinye njikọta HF rotary n'ime mgbanaka mgbanaka eletrik dịka achọrọ.
Otu Media Rotary Union
AOOD na -enye usoro mgbasa ozi mgbasa ozi site na ịnyefe mmiri ma ọ bụ gas site na isi mmalite gaa na ebe ntụgharị mgbe ị na -enye ohere ịkwaga. A na -eji ndị ọrụ mgbasa ozi rotary na ngwa dị iche iche site na tebụl ndọtị rotary ruo mandrel nhazi mpempe akwụkwọ ruo akụrụngwa ọhịa hydraulic. Enwere ike itinye mgbanaka na -amị amị, njikọta eriri fiber optic, njikọ rotary HF na encoder n'ime usoro njikọta rotary. Ma ịchọrọ ngwọta pụrụ iche maka nnukwu nrụgide, ọsọ ọsọ na -arụ ọrụ ma ọ bụ mpịakọta dị elu, na -agbagha AOOD.